Dooda: haweeneyda dhabta ah ee qiimaha leh waa kan aan cararin marka dhibaato dhacdo ninkeeda "Run ama been? "In la guursado waa in laga helaa waxa kale oo dhan oo aadan ahayn, iyo in aad ogolaato naftaada in lagu dhammeeyo kala duwanaanshaheeda
Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 5, 2020 00: 20 No Comments
Haddii aad hesho qof dumar ah oo leh ugu yaraan 2/3 oo tayooyinkaas leh "Guursada" ... Run ama Been?
1. Kama xanaaqeyso markaad ka hor imaanayso ra'yigeeda.
2. Waxay noqoneysaa murugo sababtoo ah murugadaada ama inaad aragto caro.
3. Waxay si joogta ah isku dayeysaa in ay abuurto mawduucyo wadahadal ah.
4. Marwalba waxay kugula talineysaa ka hor intaanad waxba samayn ama go'aan gaarin.
5. Way ku faraxsan tahay inaad adigu wax u siiso wax aan micno lahayn oo fudud oo laga yaabo inay sidaas tahay.
6. Waxay had iyo jeer isku dayaan inay ku caawiyaan ama hawlo kuu qabtaan si ay kuugu qancaan (Fadlan).
7. Waxay ka walwalaysaa maqnaanshahaaga.
8. Waxay ku dadaaleysaa inay sameyso waxa aad jeceshahay iyo inay illowdo waxaad neceb tahay.
9. Ma danaynayso waxa aad kasbatay dhaqaale ahaan.
1. Way xiiseyneysaa waxaad qabato, waxaad jeceshahay oo aad rabto inay ka mid noqoto adduunkaada iyo waxyaabaha aad jeceshahay.
2. Kama xishoonayso adiga ama wax kasta oo aad samayn karto.
3. Waxay ixtiraameysaa oo difaaceysaa.
Sep29 05: 58